"AZA KETRAKA AMIN'NY FANAOVAN-TSOA FA HIJINJA AMIN' NY FOTOANA ISIKA RAHA TSY KETRAKA" Gal. 6, 9
Tanjona: "Kristianina miaina ny finoana, tia manao soa ary mamy hoditra"
Ry Kristianina hava-malala,
Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina!
Mitsingerina indray ity ny taona, ka nahatratra soa ny taona vaovao 2017 isika. Miarahaba antsika rehetra nahatafita soa ny taona lasa sy nahatratra ny taona vaovao. Mirary antsika rehetra ihany koa ho samy ho ambinin'Andriamanitra ka ho salama tsy hozohin'aretina, ary indrindra haharitra amin'ny finoana amin'ity taona vaovao diavintsika ity sy ny taona maro mitsingeringerina mbola ho avy.
Mifanindran-dalana amin'izany firariantsoa izany no indro anolorana antsika indray ny hafatry ny Pretra; hanentanana antsika hamakivaky am-pitokiana sy hafaliana ary ara-pinoana ny taona vaovao, na dia eo aza ny olana maro samihafa hatrehina ankehitriny.
Lohahevitra nofidiana hoentintsika mandalina hatrany ny finoantsika àry ny hoe: "Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, fa hijinja amin'ny fotoana isika raha tsy ketraka" Gal 6, 9
Mitaky adidy mantsy ny finoana ary maniraka antsika tsy hipetrapetra-poana. Koa manentana antsika rehetra àry dieny ety am-pisantarana ny taona vaovao mba tsy hanjehy ny andro ho lava, fa hanana fahavononana avy hatrany sy hanana fanapahan-kevitra matotra ary tsy ho ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Amin'izay dia afaka hanantena hijinja amin'ny fotoanany isika. Nazoto niezaka isika hatramin'izay, tsy nitaredretra, feno hafanam-po. Nankalaza sy niaina ny Taon-jobilin'ny Famindrappo isika taon-dasa. Hotohizantsika ny fiainana izany famindrampo izany.
Nahafoy tena, nahafoy fotoana, nahafoy vola aman-karena ianareo, ankaherezina isika rehetra mba hanoy izany ezaka tsara efa natao izany. Ho an'ireo mbola varimbariana na matoritory kosa, mifohaza fa taona fifohazana izao androm-mamonjena izao. Ampahatsiahivina etoana ihany koa fa nantitraterin'ny Raiamandreny nitsidika antsika tamin'ity taona ity fa mila miezaka ireo mbola miaina ao anaty tokantrano imaso mba hiroso amin'ny mariazy. Tena ilaina ny fikarakarana ny 'Trano olona" fa tsy ho variana fotsiny amin'ny fanatsarana ny "trano hita maso".
Mitodika aminareo isan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana isan-ambaratonga aho. Aoka ho jiro mirehitra eo amin'ny sehatra misy anareo tsirairay avy ianareo. Iaino ny sakramenta noraisinareo.
Torak'izany koa isika tompon'andraikitra amin'ny Fiangonana. Aoka hiaina ny sakramenta noraisintsika isika, ho vonona hanompo fa tsy ho tompoina; ary handà tena hidina, hijery ifotony ireo madinika nankinin'Andriamanitra amintsika.
Ary ianareo fikambanana masina sy vaomieran'asa isan-tsokajiny, aoka ho zezika hampiroborobo ny Fiangonana ianareo. Hiaina marina ny sori-dalam-pikambanana misy anareo tsirairay avy.
Mbola maro ny adidy miandry antsika, indrindra amin'ny fiomanana sy fanomanana ny Taon-jobily faha-150 taona ny Fiangonantsika ankalazaina amin'ny taona 2018. Hiezaka ho matotra ara-pinoana àry isika, hirotsaka hanatevin-daharana ny Fikambanana Masina, handray anjara mavitrika any amin'ny APV - satria tsy mamela antsika hipetrapetraka ny Evanjely. Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa ny soa atao levenam-bola!
Samia ho tahian'Andriamanaitra!
Père Curé Mahamasina
Père Aumônier Distrika Mahamasina
RANDRIANANTOANINA Jean Marie Arsène